PDF မှ TIFF - အွန်လိုင်း၊ လုံခြုံသည်၊ သီးသန့်နှင့် အခမဲ့
PDF မှ TIFF
TIFF ပုံရိပ်များကို PDF သို့ပြောင်းပါ. သင်၏ဖိုင်များကို browser ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ PDF ကိရိယာများသည် သင့်ဖိုင်များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် လွှဲပြောင်းခြင်းမပြုပါ။ ထို့ကြောင့် သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် လုံခြုံရေးကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ထားသည်။
ဤ ၀ က်ဆိုက်ကို ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ဤကိရိယာကိုသုံးခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒကိုသင်သဘောတူသည်။
PDF Tools အွန်လိုင်း tool ကိုမိတ်ဆက်
PDF Tools သည် PDF ဖိုင်များတွင် အသုံးအများဆုံးနှင့် အသုံးဝင်သော လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေမည့် PDF ကိရိယာများစုစည်းမှုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိရိယာများသည် ထူးခြားသည်- ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် သင့်ဖိုင်များကို ဆာဗာသို့ လွှဲပြောင်းရန် မလိုအပ်ပါ၊ သင့်ဖိုင်များတွင် လုပ်ဆောင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဘရောက်ဆာကိုယ်တိုင်က စက်တွင်းတွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။
အခြားအွန်လိုင်း PDF ကိရိယာများသည် ပုံမှန်အားဖြင့် ၎င်းတို့ကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ဆာဗာသို့ သင့်ဖိုင်များကို ပေးပို့ပြီးနောက် ရရှိလာသောဖိုင်များကို သင့်ကွန်ပျူတာသို့ ပြန်လည်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အခြားသော PDF ကိရိယာများနှင့် နှိုင်းယှဉ်လျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိရိယာများသည် လျင်မြန်ပြီး ဒေတာလွှဲပြောင်းမှုများတွင် ချွေတာနိုင်ပြီး အမည်မသိ (သင်၏ ဖိုင်များကို အင်တာနက်ပေါ်တွင် လွှဲပြောင်းမထားသောကြောင့် သင်၏ privacy ကို လုံးဝကာကွယ်ထားသည်)။
ကျွန်ုပ်တို့သည် cloud အခြေခံ သို့မဟုတ် သင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် စက်တွင်း၌ လုပ်ဆောင်သည့် လုံခြုံသောအွန်လိုင်းကိရိယာများကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ပါသည်။ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအား ကာကွယ်ခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကို တီထွင်သည့်အခါ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကစိုးရိမ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် ပြည်တွင်း၌ လုပ်ဆောင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ အွန်လိုင်းတူးလ်များသည် သင့်ဒေတာ (သင်၏ဖိုင်များ၊ သင့်အသံ သို့မဟုတ် ဗီဒီယိုဒေတာ စသည်) ကို အင်တာနက်မှ ပေးပို့ရန် မလိုအပ်ပါ။ အလုပ်အားလုံးကို ဘရောက်ဆာကိုယ်တိုင်က စက်တွင်းတွင် လုပ်ဆောင်ပြီး ဤကိရိယာများကို အလွန်လျင်မြန်ပြီး လုံခြုံစေပါသည်။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကိုဇာတိအမြန်နှုန်းဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုသောဘရောက်ဆာကိုယ်တိုင်လည်ပတ်သည့်ကုဒ်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်သော HTML5 နှင့် WebAssembly ကိုအသုံးပြုသည်။
အင်တာနက်မှ ဒေတာပေးပို့ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းသည် ပိုမိုလုံခြုံသောကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကိရိယာများကို သင့်စက်ပစ္စည်းပေါ်တွင် စက်တွင်း၌လည်ပတ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ပါသည်။ တခါတရံတွင် ၎င်းသည် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသော၊ ဥပမာအားဖြင့် သင့်လက်ရှိတည်နေရာကို သိရှိထားသည့်မြေပုံများကို ပြသရန် သို့မဟုတ် ဒေတာမျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည့် ကိရိယာများအတွက် အကောင်းဆုံး သို့မဟုတ် ဖြစ်နိုင်ချေမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ cloud အခြေခံအွန်လိုင်းကိရိယာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ cloud အခြေခံအဆောက်အအုံမှ ပေးပို့ပြီး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသော သင့်ဒေတာများကို စာဝှက်ရန် HTTPS ကို အသုံးပြုကာ သင့်ဒေတာကို သင်တစ်ဦးတည်းသာ ဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည် (၎င်းကို မျှဝေရန် ရွေးချယ်မထားပါက)။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ cloud-based tools များကို အလွန်လုံခြုံစေသည်။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ ကို ကြည့်ပါ။
သင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဦးစားထားပေးသည့် နောက်အဆင့် cloud-based သို့မဟုတ် ဒေသတွင်းတွင် လုပ်ဆောင်နေသည့် အွန်လိုင်းတူးလ်များ
© 2022 itself tools. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။